बैंकले ऋण नदिएपछि यी व्यक्तिले बैंकमा नै लगाइदिए आ’गो – Patrika Nepal
बैंकले ऋण नदिएपछि यी व्यक्तिले बैंकमा नै लगाइदिए आ’गो
पुष २७, २०७८ मंगलबार 27
भारतको कर्नाटक राज्यस्थित हावेरी जिल्लाका ३३ वर्षीय एक व्यक्तिले एक बैंकमा आ’गो लगाइदिएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेअनुसार बैंकले सुरुमा ती व्यक्तिलाई बैंकले ऋण दिन अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि रि’साएका उनले बैंकमा आ’गो लगाइदिएका हुन्। समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार ती व्यक्तिको नाम वासिम अकरम मुल्ला हो। उनले धेरै बैंकहरुबाट ऋण लिन प्रयास गरेका थिए। एक गै’रसरकारी संगठन चलाउनका लागि उनलाई कुनै पनि बैंकले ऋण दिएनन्।
उनलाई ऋण नदिनुको कारण उनले यसअघि पनि धेरै ऋण लिइसकेका थिए। हावेरीको प्रहरीका अनुसार शनिबार राति वासिम आफ्नो मोटरसाइकलको दुवै नम्बर प्लेट ह’टाएर आफ्नो गाउँबाट हेडिगोन्डा पुगेका थिए। त्यसपछि उनले बैंकको पछाडिको झ्यालको सिसा फोडेर भित्र प्रवेश गरेका थिए।
उनले आफ्नो साथमा पेट्रोल पनि लिएर गएका थिए। बैंकमा आ’गो लगाइसकेपछि उनी पानी ब’ग्ने नालीमा हा’म फा’लेर भाग्ने प्रयास गरेका थिए तर स्थानीय मानिसहरुले उनलाई समातेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाए। बैंकका अनुसार आ’गलागीको कारण करिब १६ लाख बराबरको क्ष’ति भएको छ।
Prevजिउँदो श्रीमानको मृ’त्यूदर्ता बनाएर श्रीमतिले गरिन सम्पति क’ब्जा
Nextकाठमाडौँ उपत्यकामा आज राति १२ बजे देखिनै लागु भयो यी १८ नियम, उल्लङ्घन गरे कारवाही हुने (बिज्ञप्ति सहित)
फेरि राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म कर्फ्यू लगाउने निर्णय !
थुनामा रहेका इच्छाराजको सुन्धाराको सीटीसी मल लिलामी विक्रिमा, कति हो दाम ?
मन्त्री बन्न नपाएर आफ्नै नेताको पुत्ला जलाएपछि भएको पद पनि गयो